यस्ता छन् मेथी खानुका फाइदा र बेफाइदा | Seto Khabar
२०७७ फागुन ८, शनिबार (८ महिना अघि)
काठमाण्डौँ । हाम्रो वरिपरि पाइने स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक खानेकुराहरूमध्ये ‘मेथी’ (Fenugreek) पनि एक हो। यो विभिन्न प्रकारका रोगहरूको उपचार गर्न प्रयोग गरिने एक जडीबुटी हो। यसको पात र बिउलाई तरकारीको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।Methi
मेथीको दानामा प्रशस्त मात्रामा प्रोटिन, भिटामिन-सी, नायसिन, पोटासियम र डायोसजेनिन (Protein, Vitamin-C, Niacin, Potassium and Diosgenin) पाइन्छन् भने त्यसलगायत मेथीमा अल्कालोइड्स, लाइसिन (Alkaloids, Lysine) जस्ता स्वास्थ्यवर्दक तत्वहरू पनि पाइन्छन्। यसको सेवनले पेटको समस्यालाई टाढा राख्नुको साथै छाला र कपाललाई पनि फाइदा गर्दछ।
मेथीको दानामा पाइने विभिन्न किसिमका पौष्टिक तत्वहरूले हाम्रो कामेच्छाको वृद्धि गराउँदछ भने महिलाहरूमा हुने रजस्वलाको समस्यालाई पनि कम गर्दछ। नेपाल, भारत र चीनमा यसलाई हाडजोर्नीको रोग, दम, ब्रोङ्काइटिस, पाचन प्रणालीको समस्या, पुरुषमा शीघ्र स्खलन, छालाको समस्या (घाउ, पासेको र पोलेको), घाँटीको समस्या जस्ता थुप्रै रोगहरूको उपचार गर्नको लागि प्रयोग गर्ने गर्छन्।
मेथीमा के-कस्ता पौष्टिक तत्वहरू पाइन्छन्?
मेथी के-के कुराको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ?
मेथीका अनगिन्ती फाइदाहरूको बारेमा त माथि नै उल्लेख गरिसक्यौँ। त्यसलगायत यसलाई घरेलु उपचारका विधिमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै;
मेथीमा पाइने ग्लाक्टोमेनन (Glactomanon) ले हाम्रो मुटुलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ। साथै, यसमा पोटासियम पनि पाइने हुनाले शरीरको रक्तचाप र मुटुको धड्कनलाई नियन्त्रण गर्न मेथीको सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ। (मुटुरोगबाट बच्ने अन्य उपायहरूको बारेमा जान्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
थरी-थरीका शारीरिक व्यायाम र खानपिनमा ध्यान दिँदा दिँदै पनि अधिकांशको मोटोपनामा नियन्त्रण भैरहेको हुँदैन। यदि यस्तो अवस्था छ भने, बिहान उठ्ने बित्तीकै खाली पेटमा १ चम्चा मेथीको धूलो मनतातो पानीसँग खानुहोस्। यसमा भएको फाइबरले गर्दा तपाईँलाई धेरै भोक लाग्न दिँदैन र बिस्तारै मोटोपनामा पनि नियन्त्रण हुँदै जान्छ। (सुतीसुती मोटोपना घटाउन के गर्नुपर्छ? जान्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
छालामा आएको दाग, खटिरा अनि घाउको लागि पनि मेथीको दानाले उपचार गर्न मिल्दछ। त्यसको साथसाथै, आगोले पोलेको, हतियारले काटेको, लुतो, पिलो, डण्डिफोर जस्ता समस्यालाई रोक्न पनि मेथीले सहयोग गर्दछ। त्यसको लागि;
आफूलाई चाहिएजति मेथीको दाना लिनुहोस् र त्यसलाई मसिनो हुने गरी पिस्नुहोस्। उक्त धूलोलाई मनतातो पानीमा मिसाएर लेदो बनाउनुहोस्।
त्यसपछि एउटा सानो सफा र नरम लुगामा उक्त लेदो राखेर सङ्क्रमित छालामा लगाउनुहोस्।
११. सुत्केरी महिलाहरूमा दूध उत्पादन शक्ति बढाउन
प्राचीन समयमा पनि सुत्केरी महिलाहरूको दूध उत्पादनको लागि मेथीलाई प्रयोग गरेको पाइएको छ। अनुसन्धानबाट पनि, सुत्केरी महिलाले मेथी खाएको २४ देखि ७२ घण्टा भित्रमा ५०० प्रतिशतले दूध उत्पादनमा वृद्धि भएको पाइएको छ। यस्तो किन हुन्छ भनेर कुनै ठेट प्रमाण भने भेटिएको छैन। तर यसमा भएको चिल्लो पदार्थले मूख्य भूमीका खेलेको हुन सक्ने अनुसन्धानकर्ताहरूको राय छ। त्यसैले दिनमा ३ पटक कम्तीमा पनि ५०० मिलिग्राम मेथीको सेवन गर्नाले सुत्केरी महिलाहरूको दूध उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ।
मेथी खानुका बेफाइदाहरू
हरेक कुराहरूको आ-आफ्नै फाइदा पनि छन् र बेफाइदा पनि छन्। त्यसै गरी, मेथीको पनि बेफाइदा नभएको होइन, तर यसको फाइदाको दाँजोमा बेफाइदा अलि थोरै नै रहेको छ।
सामान्य मात्रामा मेथीको सेवन गर्दा कुनै हानी गर्दैन, तर कसै-कसैलाई यसले नकारात्मक असर पनि गरेको पाइएको छ। सबैभन्दा साझा साइड-इफेक्ट भनेको रिङ्गटा लाग्नु हो। साथै, यसलाई छालाको उपचारको लागि प्रयोग गर्दा कसै-कसैमा एलर्जी भएको पनि पाइएको छ।
गर्भवती महिलाहरूले मेथीको सेवन गर्नु एकदमै हानीकारक हुन्छ, किनभने यसले गर्भाशयको मुखलाई खुल्ला गर्ने काम गर्दछ। प्रशवावस्थामा नपुग्दै गर्भाशयको मुख खुल्न गएका बच्चा तुहिने पनि हुन सक्छ। त्यसैले, यो कुरालाई विशेष ध्यान जरुरी हुन्छ। यदि गर्भवती महिलाहरूलाई मेथी खान मन लागेमा, चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्ने हुन्छ।
यदि तपाईँले अन्य कुनै औषधीको सेवन गर्नुभएको छ भने पनि, मेथी खाँदा ध्यान पुर्याउनुपर्ने हुन्छ। औषधी खानुभन्दा ३ घण्टा अगाडि नै, कि त औषधी खाएको ५ घण्टा पछाडि मात्रै मेथीको सेवन गर्नुहोला। किनभने, यसमा भएको फाइबरले अन्य मेडिकल औषधीसँग प्रतिक्रिया गर्दछ र उक्त औषधीको प्रभावलाई शून्य बनाइदिन्छ।
बालकहरूलाई मेथी खान दिनुहुँदैन। यसले बच्चाहरू मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुर्याउने अनुसन्धानबाट देखिएको छ। बच्चालाई मेथी खुवाउँदा, उनीहरूको शरीरबाट दुर्गन्ध आउने समस्या देखिन सक्छ।
बाथरोगको समयमै उपचार गर्दा आयु बढ्न सक्छ
कोभिडको तेस्रो लहर आए पनि पुरानो मेडिकल कलेज तयारी अवस्थामा छ : डा. मनोहर प्रधान (भिडियोसहित)
काठमाडौंका यी ठाउँमा असोज ४ गतेदेखि भेरोसेलको दोस्रो डोज लगाइने